Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mifampiandry eo ambavahady | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mifampiandry eo ambavahady
Mitsitaitaika tsy araky ny nanampoizina azy ny fametrahana ny antontan-taratasy momba ny filatsahana amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny Repoblika. Mpifaninana roa lahy izay heverin’ny maro ho anisan’ny voalohany amin’ny fananany vintana ho voafidy. Andry Rajoelina moa no mpifaninana nanefa voalohany ny fametrahana ny dossier manaraka ny fenitra apetraky ny fitsipika sy lalàna. Setrin’izany ve no mitarika an’i Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina mifaninana amin’ny fanaovana tsy ankihetsika mahatonga ny olona hanontany hoe fidongiana sa fihetsiketsehana izay rehefa miverimberina dia samy fomba mety hisarika ny vahoaka tsy hanadino ny tena.
Na fahatsiarovana mikasika fihetsika mendrika dera na mampitadidy zavatra natao tsy dia mendrika doka, dia samy tsara avokoa hono rehefa mivarotra, hany ilaina dia ny hatsiarovan’ny olona ny anaran’ny tena amin’ny fotoana ilana izany. Na misy milaza aza anefa fa mitovy amin’ny varotra ny fifidianana raha tena handafo entana dia manao dokam-barotra. Sanatria na maro aza no lasa eritreri-dratsy maheno an’izany sy mahita ny fanao eto an-toerana matetika, tsy fivarotan-tena no resaka fa fivarotana ny hevitra aroson’ny tena. Hevitrevitra mitovitovy daholo anefa no tazana matetika hany ka lasa ny fomba fihetsika no hany sisa ahafahan’ny mpifidy mifantina ny mpilatsaka.
Eo ary ny fihetsiketsehana mikasika ny laharana azon’ny tsirairay teo am-pametrahana ny «dossier» fanambarana an’izany eo amin’ny fanjakana. Rehefa tononina ny lisitry ny tafita dia voalohany Andry Rajoelina, manaraka ny anaran’ireo mpifaninana sasany gisitra Ravalomanana sa Rajaonarimampianina, miady gisitra angamba izy ireto mba tsy ho very ao anatin’ny be sy ny maro. Tena hitondra vokatra anefa ve izany ? Angaha misy tetika afaka dinganina noho ny fiheverana azy ho mety tsy handaitra. Mety hiteraka fanenenana any aoriana ny tsy firaikana amin’ny zavatra heverina ho madinika.
Raha sendra ny mpitsara valavala no mahita ny fiandrasan’ny tandapan’ireo mpilatsaka roa ireo eo ambavahady mandra-pipaikan’ny fotoana farany « 21 Aogositra amin’ny 5 hariva» vao hiditra, ka ho soratan’ilay mpitsara ho mpizara ny laharana gisitra, mety ho lany hasina ilay tetika. Mety ho jeren’ny olona ho toy ny hatsikana ka ataony antony fihomehezana fotsiny toy ny tantaran’Ikotofetsy sy Imahakà. Faly matoa mihomehy, hoy ilay olona tranainy izay.